ग्रहमा सब भन्दा छिटो बढ्ने ब्लग? | Martech Zone
बिहीबार, डिसेम्बर 7, 2006 शुक्रवार, अक्टुबर 24, 2014 Douglas Karr
एक बर्ष भन्दा अगाडि (२०० 2005) मैले निर्णय गरे कि म आफैंमा केही टेक्नोलोजी लक्ष्यहरू राख्नु पर्छ। सेठ गोडिन, माल्कम ग्लेडवेल, रोबर्ट स्कोबल र शेल इजरायल जस्ता मान्छेबाट प्रेरित भएर म ब्लगि,, सोशल नेटवर्कि,, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, र विश्लेषण साथ साथै सबै अन्तर्निहित टेक्नोलोजीहरू जसले उनीहरूलाई भगाउँछ। यो रकेट विज्ञान भएको छैन, तर यो मेरो जीवनको एक अद्भुत अवधि हो। मैले मेरो उत्कटता के हो पत्ता लगाएको छु, र मैले मेरो क्षमताहरूमा धेरै विश्वास निर्माण गरेको छु।
हालसालैका रूपमा, मैले केहि धेरै ब्लगरहरूलाई पार गरें जसले मलाई शिक्षा प्रदान गरे। ती व्यक्तिहरूका लागि अन्तिम प्रशंसा हुनु पर्दछ (म आशा गर्दछु कि उनीहरूले यसलाई त्यस तरीकाले लिनेछन्!)। टेक्नोराटी मार्फत ,55,000,000 35,000,०००,००० ब्लगहरू ट्र्याक गर्दै, म अब द्रुत गतिमा र 100 XNUMX,००० वा त्यस भन्दा माथिको श्रेणीमा पुग्दछु। त्यो उत्कृष्ट विकास हो र उद्योगमा केही ध्यान खिच्नु पर्छ। म अझै शीर्ष १०० मा छैन, न त मैले कुनै ब्लगि award पुरस्कार कमाएको छु ... तर मेरो मेहनत र मेरो विषयको ज्ञानको परिणाम चुकाइसकेको छ। यो मेरो विरुद्ध धेरै हडताल भए पनि:
म धनी होइन
म प्रसिद्ध छैन
मँ उद्योग मा 'अंदर' जानकारी छैन
मसँग उद्योग जडान छैन
म सिलिकॉन भ्यालीमा बस्दिन (म इन्डियानामा बस्छु!)
मैले पुस्तक लेखेको छैन (अझै!)
म दुबै पूर्ण-समय काम र साइड कार्य गर्दछु
मैले पाएका केही फाइदाहरू:
मसँग मेरो आफ्नै होस्टिंग छ त्यसैले मेरो साइट राख्ने र यसलाई कायम राख्ने केकको एक टुक्रा हो।
म प्रोग्राम गर्न सक्छु। वर्डप्रेस एक अभूतपूर्व ब्लगिंग प्लेटफर्म हो, तर मैले मेरा थिमहरू र मेरो ग्राहकहरूको 'चिमटाई' गर्नु पर्‍यो उनीहरूलाई प्रयोगयोग्यता र खोज इञ्जिन अनुकूलनको लागि साच्चिकै अनुकूलन गर्न।
दिमागमा त्यो साथ, मलाई लाग्छ कि निम्न तथ्या .्कहरू एकदम प्रभावशाली छन् र मैले गरेको कडा मेहनतको साथ कुरा गर्नुहोस्। यहाँ शीर्ष १०० ब्लग वा पर्याप्त प्रख्यात ब्लगर्स र तिनीहरूको--महिना बृद्धिको सूची छ।एलेक्सा.क.)। हो, ब्लगोस्फीयरको शीर्ष स्तरहरूमा स्क्र्याप गर्नु अघि मैले धेरै लामो यात्रा गर्नुपर्दछ - तर यसले अझै प्रमाण दिन्छ कि मेरो ब्लगको सामग्री र सल्लाह उपयोगी र केन्द्रित रहेको छ।
जोन चाउ डट कम
उत्तेजक प्रयोगकर्ताहरू सिर्जना गर्दै
मैले यो प्रगति कसरी गरेको छु? तपाईंले यहाँ केहि पठन पढ्नु पर्छ, तर मैले कुनै रहस्य पछाडि पारेको छैन। यो सबै यहाँ यो ब्लगमा छ ... प्रयोगहरू, परिणामहरू, सबै कुरा! सायद ढिलोको सब भन्दा रमाईलो खबर यो ज्ञान केहि नयाँ ब्लगरहरु को लागी साझा गर्नु हो। म अहिले केहि परामर्श गर्दै छु र उनीहरुलाई सहयोग गर्दै छु। म उनीहरूको तथ्या forward्कलाई बाइपास गर्न दिनको लागि आतुर छु (आशा छ म शीर्ष १०० मा छु!)
पढ्नका लागि धन्यबाद! टिप्पणीका लागि धन्यबाद! फिर्ता आउनु भएकोमा धन्यवाद! यदि त्यहाँ केहि शीर्षकहरू छन् जुन तपाईले मलाई कभर गर्न चाहानुहुन्छ भने कृपया स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। मँ वास्तव मा बारेमा ब्लग को लागी जानकारी को लागी भाग कहिल्यै - तर म तपाइँको छनौट को शीर्षक मा delve अवसर मन पराउँछु।
मलाई थाहा छ म यस ग्रहमा सब भन्दा द्रुत बृद्धि भएको ब्लग होइन ... तर मेरो कडा परिश्रम is तिर्दै। फिर्ता आउन जारी राख्नुहोस्, म तपाईंसँग साझेदारी गर्न जारी राख्नेछु!
टैग: ब्लगि growth बृद्धितपाईंको ब्लग बढाउनुहोस्वृद्धिम्याल्कम ग्याडवेलरबर्ट स्कबलसेठ Godinशेल इजरायलटेक्नोराटीWordPress
गुगल नक्शा अब KML समर्थन को साथ
डिसेम्बर १, २०१72006:२:9 अपराह्न
हे डग, तपाइँको बृद्धि मा बधाई। मलाई लाग्छ कि हामी तपाईंसँग घोडा दौडमा छौं। भर्खर एक बर्ष भन्दा पहिले सुरू भयो ...
डिसेम्बर १, २०१72006:२:10 अपराह्न
धन्यबाद, स्कट! र साथसाथै तपाईंलाई बधाई दिनुहुन्छ! एउटा कुरा जुन मलाई यो रेसको बारे मनपर्‍यो त्यो हो कि कोहीले पनि जित्न सक्छ र 'विजेताहरू' को लागी धेरै ठाउँहरू छन्!
डिसे 8, 2006 मा 12: 47 AM
ठूलो काम डग। म विगत केहि महीनहरु को लागी तपाईको ब्लग को सदस्यता लिएको छु, र अहिले सम्म मैले के देखेको छु लाई वास्तवमै मनपर्‍यो। एक ब्लगर को रूप मा भर्खरै शुरू (र मेरो बिरूद्ध सबै उही हडताल संग), मलाई थाहा छ नयाँ पाठकहरु को आकर्षित गर्न कत्ति गाह्रो हुन सक्छ जब तपाईं भर्खरै सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। राम्रो काम जारी राख्नुहोस्!
डिसे 8, 2006 मा 6: 36 AM
मेरो प्राविधिक ब्याकबोन र साथी भएकोमा धन्यवाद। आशा छ कि म गर्न सक्दछु (को लागी) तपाईले तपाईका "सल्लाहकार" लाई के गर्नुभयो - तपाईलाई पास गर्नुहोस् !! हाहा !! म have महिनाको औसत पाउन धेरै समय लाग्दिन, तर यस्तो देखिन्छ कि म राम्रोसँग ट्रेन्ड गर्दैछु ... तपाईंलाई धन्यवाद।
Patcoyle.net को लागी यातायात रैंक:
आज १ हप्ता औसत Mos मस औसत Mos मस परिवर्तन
N / A * 386,650 850,770० XNUMX०,XNUMX० -
मँ पहिलो टिप्पणी होईन, त्यसैले म यहाँ पोस्ट गर्दिन यहाँ मात्र या त मेरो ब्लग मा ट्राफिक प्राप्त गर्न।
डिसेम्बर १, २०१ 8 2006:२:4 अपराह्न
ती दयालु शब्दहरू हुन्। म यसलाई धेरै कदर गर्छु। मँ आवश्यक रूपमा मेरो ब्लग को वृद्धि touting मन पराउँदिन - तर कहिलेकाँही तपाईं नाम वा प्रसिद्धि छैन जब तपाईं मान्छे थाहा दिनु पर्छ कि तपाईं अझै पनि तिनीहरूको ध्यान को योग्य हुनुहुन्छ।
पछिल्लो पटक मैले मेरो ब्ल्गको विकास र सफलताको बारेमा पोष्ट गरें, यसले पहुँचमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्‍यो। (http://www.dknewmedia.com/2006/09/03/my-blog-is-better-than-9986-of-all-other-blogs/)
म आश्चर्य छ कि यसले हाम्रो बारेमा पाठकहरूको रूपमा के भन्छ? म जोनाथन चौको ब्लगको सदस्यता लिन्छु कि पढ्न पछि उसले आफ्नो ब्लाग कत्तिको सफल भयो भने। अवश्य पनि, मैले उहाँबाट पनि धेरै कुरा सिकें! उसको तथ्या .्क पनि दृष्टि बाहिर छन्।
फेरि पनि धन्यबाद! र यदि तपाईंलाई कुनै सहयोग चाहिन्छ भने - सोध्न नहिचकिचाउनुहोस्!